जीवनी लेखनमै जिन्दगी बिताउने छु : गोपाल पराजुली | Ketaketi Online
Home » जीवनी लेखनमै जिन्दगी बिताउने छु : गोपाल पराजुली
posted by ketaketionline on Tue, 06/23/2015 - 14:47
१. अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अहिले २५ प्रतिभा जीवनी सङ्ग्रह भाग ८ को तयारी गर्दै छु । धेरै काम सकिसकेको छ । यो किताब चाँडै बजारमा आउँदै छ । यो किताबमा नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा योगदान गरेका २५ जना प्रतिभाहरुको जीवनी रहने छ ।
भर्खरै मेरो लिटरेरी आइक्यान अफ नेपाल, भाग १ कृति प्रकाशित भएको छ । यसमा ५० जना साहित्यकारको जीवनी अङ्ग्रेजी भाषामा रहेको छ । थप ५० जना साहित्यकारहरुको जीवनी रहेको लिचरेरी आइक्यान अफ नेपाल भाग २ पनि छिट्टै प्रकाशित हुँदै छ । यो दुवै कृति रत्नपुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको हो । चन्द्र गुरुङको अनुवाद र महेश पौड्यालको सम्पादनमा दुवै कृति तयार भएको हो ।
२. जीवनी मात्र लेख्नु हुन्छ, यसको खास केही कारण छ कि ?
म वि. सं. २०१८ सालमा महात्मा गान्धीको जीवनीको किताब पढेर ज्यादै प्रभावित भएको थिएँ । हाम्रा असल मान्छेलाई पनि बालबालिकामाझमा यसरी नै चिनाउनु पर्छ भनेर म त्यतिबेला नै प्रभावित भएको थिएँ । यही प्रेरणाबाट अलिअलि जीवनी लेख्दै गएको थिएँ । यसैक्रममा वि. सं. २०६० सालमा एउटा विद्यालयमा प्रमुख अतिथि भएर जाने मौका मिल्यो । त्यहाँ बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गरेँ । बालबालिकाहरु धेरैले कस्तो बन्ने भन्दा ठुलो मान्छे बन्ने भने । को जस्तो बन्ने भन्दा चलचित्रका कलाकारको मात्र नाम लिए । धेरैले साहित्यकारलाई चिनेकै रहेनछन् । यो कुरा प्रिन्सिपललाई पनि सुनाएँ । उनले पनि नेपाली व्यक्तित्वको जीवनीको किताबको कमी रहेको गुनासो गरे । त्यसपछि म पुरै यही क्षेत्रमा खटेर लागेँ । यो कामले मलाई हौसला पनि दिएको छ । राम्रो काम गरेर मरेर गएकाहरुलाई समाजमा चिनाउन पाएको छु । समाजले पनि मलाई माया र पुरस्कार पनि दिइरहेको छ । भविष्यमा पनि मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति यही काममै लगाउने छु । जीवनी लेखनमै जिन्दगी बिताउने छु ।
३. तपाईंले लेख्नु भएको जीवनीको किताब बालबालिकाले किन पढ्नु पर्छ ?
एउटा बच्चाले जीवनमा भानुभक्त, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बालकृष्ण सम जस्तो बन्छु भनेर कल्पना गर्यो भने उसले सपना देख्न थाल्छ र उसलाई यसबाट प्रेरणा मिल्छ । भानुभक्तलाई पनि घाँसीले प्रेरणा दिएको थियो । त्यसैले जीवनमा अघि बढ्न हौसला र प्रेरणा गर्न बालबालिकाहरुले बढी भन्दा बढी जीवनीहरु पढ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
मिलनचोक, बानेश्वर, काठमाडौँ ।
इमेल : parajuligopal3@gmail.com
घरको नं. ९७७ ०१ ४४९४४१२